Heerka Dhaqaale Iswiidhen oo La Ammaanay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Heerka Dhaqaale Iswiidhen oo La Ammaanay
Wasiirka dhaqaalaha ee dalkan Iswiidhen Andres borg ayaa kor u qaaday saadaalintiisa kobaca dhaqaale ee dalka Iswiidhen, middaasina ku saleeyay in xaaladda dhaqaale ee dalku ku sugan tahay wanaag. Wasiirka ayaa saadilayay in kobaca dhaqaale ee sannadka uu noqon doono 3,5 illaa iyo 4 boqolkii.
– Qaar ka mid ah saaxiibada aan ku leeyahay Yurub ayaa isticmaala kalmadaha in dhaqaalha Iswiidhen ka dhigan dheemanta. Waa mid nagu kalifeeysa dhanka kale inaan muujinno taxadar mustaqbalka si aanay u dhicin bankiyo busaaradeeysta, deeymaha bulshadu qaadato oo faraha ka baxa iyo iibsiga guryaha oo aan xadidi lahayn. Taasi waxay macnaheedu tahay in aan halkeedii kas ii wadno dib u habeeyntii dhaqaalaha, si loo dhimo shaqa-la’aanta. Kobaca dhaqaale ee dalka Iswiidhen ayaa kobcayay sannadkii hor iyo sannadihii ugu dambeeyey, waana mid nagu kallifeeysa in aannu ku tallaabsanno dib u habeeyno, sida uu sheegay Anders Borg – wasiirka dhaqaalaha ee dalka Iswiidhen, mar uu ka warramayay saadaalinta dhaqaale ee dalka.